Posted by ကလိုစေးထူး at 9:42 PM
ကိုစေးထူးရဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီးတော့ ကော်မန့်ဝင်ရေးချင်စိတ်တွေ တစ်ဖွားဖွားဖြစ်လာပါတယ်. လူဆိုတာကလည်း အမြင်အမျိုးမျိုးရှိကြသကိုးလားဗျ...
May 25, 2007, 2:35:00 AM
ကိုကလိုစေးထူးခင်ဗျာ။ အစ်ကိုက ရေးချင်စိတ်နဲ့ ကိုယ်ရေးတာကိုယ်ဖတ်တာတော့ အဟုတ်သားဆိုလို့၊ စာရေးတာက ဘလော့ဂ်မှာဆိုရင် ပြန် edit လုပ်လို့ရတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့်အကျင့်က ဘယ်သူကြိုက်မှန်းမသိ မကြိုက်မှန်းမသိ သီချင်းကို အကျယ်ကြီး အော်ဆိုရတာကိုမှ ဖီးလ် ..
အဲဒါကြီးကျ ကိုယ့်အသံကိုလည်း ကိုယ်မသိလိုက်.. သိသွားရင်လည်း ဆိုထားတာကို ပြန်ပြင်လို့မရ..
အခုအဲဒီအကျင့် ဘလော့ဂ်ပေါ်ထိ ဆွဲတင်မလို့ စဉ်းစားနေတာ.ဟဲ ဟဲ ဒါပေမယ့် တင်ဖြစ်ရင်တောင် Auto Play ကိုတော့ ပိတ်ထားပါ့မယ်နော်။
May 25, 2007, 2:50:00 AM
အင်း .. ဘုန်းကြီးထိပ်ခေါက်ပြီးမှ .. အဲ .. ဟုတ်ဘူး .. မယ်သီလရှင် ထိပ်ခေါက်ပြီးမှ .. ပြန်တောင်းပန်လို့ ရရိုးလား။
ကျမထမင်းအိုး တုတ်နဲ့ မထိုးပေမယ့် အမြင်မတော်တာဆို ကြည့်မနေတတ်လို့ … ပြီးတော့ လျှာရှည်ရတာ .. ဆရာလုပ်ရတာ အကျင့်ပါနေလို့ပါရှင်။
နောက်ကို စာဖတ်တဲ့အခါ မျက်မှန်ချွတ်ပြီးပဲ ဖတ်တော့မယ်။ မျက်စိက ခပ်မှုန်မှုန်မို့ သိပ်မမြင်ရရင် ပြောလည်းပြောမိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ :P
May 25, 2007, 6:13:00 AM
ဟုတ်တယ်နော်လူတွေကအကောင်းဘက်ကမကြည့်ပဲ၊ ဘာလို့အဆိုးဘက်ကကြည့်ကြပြီး ပွဲဆူအောင်လုပ်ချင်ကြလဲမသိဘူး၊ သူတို့အစားပူလောင်လိုက်တာ၊ ကိုကလိုစေးထူးပေးထားတဲ့ဥပမာလေးကအရမ်းကိုထိတယ်၊ လူအချင်းချင်းအကောင်းမြင်ပေးနိုင်ကြပါစေ၊ကြီးသူကိုရိုသေငယ်သူကိုလေးစား၊(ဟဲဟဲနောက်ဘာလဲမသိတော့ဘူး)......နိုင်ကြပါစေ၊
May 25, 2007, 8:25:00 AM
မောင်ရန် ရေးသော ကွန်မန့်ကိုစိတ်ဝင်စားပါသည်။ သို့သော်.. :D
ကိုမျက်လုံး.. သီချင်းတင်မှာကို မိတ္တူလာပေးနေတာလား.. ဟဲဟဲ။ တင်ဖြစ်ရင် လက်တို့လိုက်ပါ။ နားထောင်မှာပေါ့ဗျာ။
မမေ..၊ မျက်လုံးကို အ၀တ်စည်းထားလိုက်ရင် ပိုမကောင်းဘူးလား။ :P
ချစ်လေပြေ ပြောတာ ဟုတ်ပါသည်. သို့သော်..။ :D
May 25, 2007, 5:32:00 PM
May 25, 2007, 9:23:00 PM
တကယ်လေးစားတယ်ဗျာ ပေးသူ ယူသူ နဲ့ ပေးပုံ ယူပုံ(အားပေးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထောက်ပြတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်) ရှင်းသွားတယ် ဒါပေမဲ့ ပြန်မပြောတတ်ဘူး ကိုယ်ဘယ်လို ဘယ်လောက်ထိ နားလည်မိလဲဆိုတာကိုပေါ့
ခုလို အတွေးအခေါ် ပါတဲ့ စာကောင်းကောင်းလေးတွေကိုအားပေးနေပါတယ်
May 28, 2007, 11:28:00 PM